नेपाल आइडलकी रमाको दुखको कहानी , सुन्दा कसको मन नरोला ( भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
नेपाल आइडलकी रमाको दुखको कहानी , सुन्दा कसको मन नरोला ( भिडियो सहित )
नेपाल आइडल सिजन २ मा भाग लिएकी प्रतिस्पर्धी हुन् रमा तामांग। अरु प्रतिस्पर्धी भन्दा फरक उनि संगीतमा रुचि राख्ने , संगीतमा दक्खल राख्ने भएपनि उनि संगीत सिकेकी भने छैनन् तर संगीत सिकेको गायक जति नै राम्रो गाउछन।
नेपाल आइडलमा भिडेकी उनि नेपाल आइडलको गाला राउण्डमा पुग्न सकिनन्। उनि आउट भैसकिन। जिबनको विभिन्न आरोह अबरोह पार गर्दै आएकी उनले ठुलोको दिन देखेकी छिन। एउटा गरिब घरको छोरीले आफ्नो जिबन र आफ्नो भाइबहिनी पाल्न का लागि लेबर काम गरेको देखि अरुको भाडा माझेको सम्म स्मरण अझै ताजा रहेको उनले सम्झिन।
आफुलाई आमाले पिटीरहने गरेको उनि सम्झिन्छिंन , यसरि आमाले आफुलाई पिटीरहदा संसार आफ्नो कोहि नभएको अनुभूति हुने गरेको सुनाइन। आफ्नो भाइ बहिनीका लागि आफ्नो भबिस्य बिगारेर काम गर्न उनि बाध्य बनिन। अरुको भरमा रमाउनु भन्दा आफ्नै कमाइमा बाच्न मनपराउने उनले महिना भर भाडा माझेर मात्र २ हजार कमाएको समेत स्मरण गरिन।
ढुंगा कुट्ने देखि , भाडा माझ्ने , लेबर काम गरेर आफ्नो परिवार पालिरहेकी रमा तामांग अहिले नेपाल आइडलमा भिडेपछि उनको जिबन भने परिबर्तन भएको छ। अहिले गीत संगीत क्षेत्रमा जम्ने उनको विचार छ। ‘ कहिले नछाड्ने दुखले घेरिएको जिन्दगि ‘ बोलको गीत गीतमा काम गरिरहेकी छिन अहिले। सुभास राइ संग रमा तामांगको डुवेट स्वरमा यो गीत रहनेछ। रमा तामांगको जिबन नेपाल आइडलले फेरि दिएको छ। अहिले उनले आफुले पाएको सफलता देख्दा पहिले पाएको सबै दुख बिर्सेको बताउछिन। तलको भिडियो हेर्नूहोस।
Prevआर्थिक अभावले जीवनमा कस्ता दुःख-पीडा भोग्नुपर्छ ? – हेर्नुहोस् भर्खरै सार्वजनिक गरिएको यो गीत (भिडियो सहित)
Nextमौरी पालेरै वार्षिक पाँच लाख आम्दानी, मौरीको घर पनि राम्रो बिक्री हुने
आज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार ,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ…
हरिवंशले खुशी ब्यक्त गर्दै आफ्नो नातिको पहिलो तस्बिर सार्बजनिक गरे (फोटो सहित)
नेपाली रोवर्टको भविष्यवाणी श्रृंखला खतिवडा मिस वर्ल्ड २०१८ बन्छिन ?-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
गिटी-बलुवा बोकेर हुर्कांएको छोरीले जब नेपाल हल्लायो, रोकिएनन आँशु ! (भिडियो सहित)